Muxuu yahay Gumeysiga aan ka Jirin Muqdisho oo ka jira Kismaayo? | News From Somalia
Gaalada dhagarteedu waa meel halka qorshaha Ilaahayna meeshiisa yahay. Reer Galbeedku waa ku guuleysteen inay gaalo-madow badan iyo gaalo-raacyo kula dagaalaan Shareecada Islaamka laakiin waxaa ku soo baxay waxyaalo aan xisaabta ugu jirin! Waxaa hadda is heysta gaalomadowdii sida Kenya iyo Ugaandha iyo sidoo kale Hawiye ku xiran Ugaandha iyo Burundi iyo Daarood ku xiran Kenya! Ogaada, mabda’ii Shareecada Islaamku waa meeshii. Waxba ma gaarin; keliya magaalooyin baa gaaladu qabsatay.
Horaan u sheegnnay inuusan miisaan lahayn warka ka soo baxaya UN-ka haddaan Maraykanku faraha la gelin sidaas darteed qeylada ka soo yeereysa Museveni ee ah inuu ciidankiisa kala baxayo Soomaaliya, inteeda badan, waxay ku jeeddaa ciidanka Kenya ee galay Jubbooyinka iyo Gedo! Waxay UN-ka iyo Maraykanku ku qancinayaan Museveni inaan lacag lagu bixin doonin markiibta Kenya ee jooga Jubbooyinka!
Horta maraakiibta la sheegayo waa kuwii lagu qabsaday Kismaayo. Waxa laga dhigayo maraakiib waaweyn oo dagaal waa dhowr markab oo la mid ah kuwii Muunye ka heystay Soomaaliya oo hal madfac iyo dhowr boobe la saaray! Maxaa qarash ah oo gooni ah oo ay u baahan yihiin dhowr markab oo yar yar oo awalba joogay Lamu in la keeno Kismaayo? Imisaa Kismaayo iyo Lamu isu jiraan? UN-ku ma oran: dhaqaale lama siinayo ciidanka Kenya ee ku jira Soomaaliya ee waxay dhaheen: maraakiib lacag kuma bixineynno? Ma shidaal lagu shubo labo markab baa dhib ku ah dowlad dhan? Waa farsamo la rabo in gaalomadowda dhegweynta ah ee Ugaandha lagu maslaxo!
Horaan ugu dignnay qaar ka mid ah odayaasha, wadaaddada, iyo siyaasiyiinta Muqdisho inaysan u horseedin dadka kale meel xun. Muqdisho waa maskaxdii iyo qalbigii Soomaalida oo waa la fiirsanayaa. Odayaal iyo siyaasiyiin jooga Muqdisho baa is tusay in iyaga keliya Soomaali yihiin! Cidday la dagaalaan, dagaalan tahay; cidday soo dhoweeyaanna, la soo dhoweynayo. Sidaas darteed waxay markii hore la dagaaleen Tigreega kaddibna waxaa la arkay iyagoo Maraykanka ku leh: annagaa Tigree saarnnay; haddeerna annagaa Shabaab saareynna ee hanaloo sad buriyo!
Waxaa la arkay Shariif sh. Axmed, Xaad, iyo Axmed Diiriye oo la aamusin waayey! Heer wuxuu gaaray Axmed Diiriye inta hoosta ka galo Ugaandho uu dhaho: sheekh hebel Baay & Bakool buu ka jeedaa, sheekh hebelna Somaliland ama Puntland. Waa sheekadii Faroole oo kale oo inta Tigreegu xor ku maraan Garoowe; tarxiili jiray dadka ka yimid Koonfurta Soomaaliya! Soow Axmed-madoobe iyo Ibraahim-dheere kuma dayan odayaashaas? Sida Xaad iyo Axmed Diiriye ula hadleen Museveni baa Axmed-madoobe Kenya ugu sheegay inay iyaga keliya ka caawin karaa qabsashada Kismaayo.
Yaa daran dad xildhibaanno sheeganayey oo gaarayey boqollaal oo Muqdisho loogu diiday inay ku shiraan xaruntoodii iyo dhowr sarkaal oo laga soo ceshay Kismaayo? Miyeynan Cismaan Caato iyo xildhibaannadii kale ahayn wixii lahaa: waddanka gumeysi buu ku jiraa markii loo diiday inay ku shiraan xaruntooda? Soow saxaafadda kama lahayn: Ugaandha waa gun, Burundi waa gun, iyo hadallo kale? Imisa suxufi baa loo diiday Garoonka Aadan-cadde iyo Xalane? Imisa wasiir ama sarkaal baa si xun loogu baaray garoonka?
Waa caddahay in Axmed-madoobe iyo Seeraar barteen in sidii Tarsan iyo Odayaasha Hawiye dadka jooga Muqdisho u abaaabuli jireen in iyaguna kuwa jooga Dhooblay, Afmadow, Baraare, iyo meelo kale loo soo saaro bannaanbaxyo! Mise xisaabtaba kumay darsan Xaad iyo Axmed Diiriye inay ku soo baxayaan niman sida Axmed-madoobe oo kale ah?
Waxaa doqonnimo ah iyadoo caasumaddii Soomaaliya gumeysi ku jiro oo u dhiganta maskaxdii iyo qalbigii Soomaaliya in wax weyn laga sii dhigo gumeysiga Kismaayo oo u dhiganta calooshoo kale! Kee daran maskax iyo calool? Xaqiiqdii, wixii Muslim ah iyo waddani ah waa ku raaxeysanayaan gaalo-raacyada lagu dulleysanayo Xamar iyo Kismaayo iyo gaalomadowda Ugaandha iyo Kenya oo is heysata. Marka waa sheeko raqiis ah in Kismaayo keliya gumeysi ku jirto!
Haddii Bashiir Salaad taageeri jiray in Amisom qabsato Afgooye iyo magaalooyin kale, Axmed-madoobana wuxuu heystaa Shibli iyo wadaaddo kale! Waxay taladu tahay waa inuu qofku ka fiirsado inuu dadka u horseedo meel xun iyo gumeysi. Haddaba haddii Hawiye hoosta gashaday Ugaandha; Daaroodna waxay soo dhoweysteen Kenya! Hadday Kismaayo gumeysi ku jirto, Xamarna waa ku jirtaa. Hadda iyo dan: ma iska saarnnaa gaalada oo dhan iyadoon loo eegeyn waddankey ka timid? Muxuu yahay dulliga ka daran in gaalada joogta Muqdisho iyo midda joogta Kismaayo ku ciyaaraan gaaloraacyadii u shaqeynayey?
This entry was posted in Amisom, Ashahaado la dirir!, Banaadir Post, CRD SOMALIA, Culumo Suu, DAMMU JADIID, Hassan Sheekh Mahamud, Igad, ITOOBIYA, Jawaari, Jubada Hoose, Kenya-Somalia, Kismaayo, MAHIGA-UNPOS SOMALIA, Maleeshiyo Beeleed, Moqdisho, Musaveni, NO NGO FOR SOMALIA, Norway, Qabyo Qoraal, Qurbajoogta Somalida, Somali Media, Somalia, Suufyada-Qabuurogaleenka, Ugandha, Xarakatul Shabaabul Mujaahidiin, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka, Xasuuqa Xabashida!! and tagged Alshabaab, Amisom, Ashahaado la dirir, CRD SOMALIA, Culumo Suu, Moqdisho, Somalia, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Xabashida!!. Bookmark the permalink.
Maleeshiyaadka Dowlada oo dagaal ku dhexmaray Isbaarada Bar Ismaciil iyo Amisom oo laga gubay gaari TOW ah waxaana gaaray dhib weyn.